Fihaonambe ara-toekarena: miantso fiaraha-mientana ho an’i Afrika ny filoha Rajoelina | NewsMada
Fihaonambe ara-toekarena: miantso fiaraha-mientana ho an’i Afrika ny filoha Rajoelina
Anisan’ny nandray anjara, nandaha-teny tamin’ny Fihaonambe iraisam-pirenena momba ny toekarena ho an’i Afrika manoloana ny covid-19 ny filoha Rajoelina Andry. Notanterahina tamin’ny alalan’ny viseo-conference izany.
Navoitran’ny filoha tamin’izany fa tonga izao ny fotoana hampisandratana an’i Afrika ka niantsoany ny fiaraha-miasa sy fifampiresahana matotra eo amin’ny samy Afrikanina. “Hoporofointsika ny firaisantsika hina sy ny fitiavan-tanindrazana anantsika ho amin’ny fanaingana ny toekarena… Mametraka fanamby isika ho an’ny ho avy mamiratra ho an’i Afrika », hoy ny filoha Rajoelina.
Niaiky ny filoha fa tena niantraika mafy tamin’ny toekarena sy ny sosialin’ny firenena maneran-tany iny valanaretina iny. Tsy afa-bela tamin’izany ny fianakaviana antoniny, indrindra fa ireo efa sahirana raha ny teto Madagasikara. “Niaina izany avokoa any firenena afrikanina. Nitontongana ny harin-karena, nihena ny fidiran-ketra… Niakatra be ny isan’ireo tsy anasa sy very asa », hoy ihany ny filoha.
Na izany aza, tsy maintsy noraisina ny fepetra samihafa na mafy aza, hiarovana ny mponina sy manoloana ny fitantanana izany valanaretina izany. nambarany tamin’izany ireo fepetra samihafa nampiharina teo amin’ny lafiny fahasalamana teto Madagasikara. Toy ny fampitaovana, ny fotodrafitrasan’ny hopitaly maherin’ny 20, ny fampitaovana sy ny fanafody… Niadiana amin’ny Covid-19. Teo koa ny fankaherezana ireo mpikaroka sy manampahaizana ka tonga hatrany amin’ny fananganana ny ozinina, Pharmalagasy, mpamokatra ny CVO +. Namahana olana ny ady amin’ny covid-19.
Fanorenana ozinina isaky ny distrika…
Nambaran’ny filoha koa fa efa an-dalana ny fanatrarana ny fahavitan-tena ara-tsakafo ho an’i Madagasikara ary mametraka izany ho laharam-pahamehana, eo amin’ny lafiny fambolena. Anisan’izany ny fanajariana velaran-tany 60 000 ha any Atsimo Andrefana. Ny hamokarana eto an-toerana ireo vokatra ilain’ny Malagasy (PPN) ary koa ny fananganana ozinina isaky ny distrika “« One District, One Factory”. Eo koa ny fanorenana ny orinasa fanamboarana fiarakodia “Gasycar”, vita eto an-toerana “Made in Madagascar”…
Etsy an-daniny, mbola miankin-doha amin’ny any ivelany ny kojakoja ara-pitsaboana ho an’i Afrika, araka ny nambarany. “Manana tanora sy ny harena voajanahary anefa isika. Ny loharanon-karena sy ny fahaiza-manao ananan’i Afrika ho amin’ny fitsaboana…”, hoy ihany ny ampahan’ny lahatenin’ny filoha Rajoelina Andry.